အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်း ပြတ်တောင်းပြတ်ေ&#4 — MYSTERY ZILLION
အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်း ပြတ်တောင်းပြတ်ေ&#4
December 2007 edited June 2008 in Internet & Email
ကျနော့် အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်း ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်း ဖြစ်နေတာကြာပြီဗျ...
အင်တာနက် ကွန်နက်ရှင်း နှေးတာက surfing လုပ်နေတဲ့လူများလို့(ကျနော့်အထင်)
ကွန်နက်ရှင်း ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းဖြစ်တာက ဘာကြောင့်ပါလိမ့်...
TTL ဆိုတာရှိပါတယ်။ Time To Live ဆိုလား မသိဘူး။ အဲဒီ TTL က data ရဖို့ စောင့်တဲ့ အချိန်ပါ။ အဲဒီ မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန် အတောအတွင်း data က ရလိုက် မရလိုက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ bandwidth နည်းတဲ့ connection တွေမှာ ဖြစ်တတ်တယ်လို့ ကြားဖူးပါတယ်။
အခု ပြောပုံအရဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ထင်တာတော့ connection bandwidth ကြောင့်လို့ထင်ပါတယ်။ ဘာ connection သုံးပါသလဲ။ connection bandwidth speed ဘယ်လောက်ပါလဲ ?
ကျွန်ုပ်တို့ဆီက ADSL (256 kb/s) တစ်ခုလဲ အမြဲ အဲ့တိုင်းပဲ.. တစ်ချက် တက်လာလိုက် တစ်ချက် ပြန်ကျသွားလိုက်နဲ့
အဲ.. ညခင်းတွေဆိုရင်တော့ ဆက်တိုက်ကောင်းတယ်.. နေ့ခင်းတွေဆို.. နှေးတာလည်း မဟုတ်ဘူး
နှေးတာဆိုရင် သုံးလို့ရသေးတယ်။ အခုက လုံး၀ကို can't not find server တွေ ဖြစ်ဖြစ်သွားတာ။ ADSL မှာလည်း မီးက connection မိကြောင်းတွေ ပြနေတယ်။ modern ပဲမကောင်းလို့လား :106:?
ကျွန်တော်လည်း အဲလိုပါပဲ..နည်းနည်းပိုတယ်လို့ပြောရမလားပဲနော်..ကျောင်းကစက်တွေက တစ်မျိုးခင်ဗျာ ..တစ်ခါတစ်လေ ဘေးကလူကရလို့၊ကိုယ်ကတော့ ငုတ်တုတ်ကိုမေ့လို့၊
ဟုတ်ရဲ့လားတော့မသိ..ဟီး.လုပ်တတ်တဲ့လူတွေကတော့ အဆင်ပြေလို့.ဘာတွေလုပ်လိုက်လဲမသိဘူး။ တောက်လျှောက်ကောင်းနေတယ်ဗျာ..လုပ်နည်းလေးသိတယ်ဆိုရင် ပညာလေးေ၀မျှပေးကြပါခင်ဗျာ..
.ဥပမာပြောရရင်တော့..အမှတ်ကြည့်လို့ရတယ်၊ကျောင်းရဲ ့အကြောင်းတွေကြည့်လို့ရတယ်။အပြင်ကိုထွက်လို့မရဘူးဖြစ ်နေတယ်။အဲဒါပိတ်ထားတယ်လို့ထင်တယ်ဗျာ..
ဖြစ်နိုင်တာကတော့ ကျောင်းမှာပဲ local run ထားတာပါ... အမှတ်ကြည့်တာ.. ကျောင်းသတင်းတွေ ကြည့်တာ.. အဲဒါတွေကို local server ကနေ run တာဖြစ်မှာပါ.. အင်တာနက်နဲ့ မချိတ်ဆက်ပဲ local server နဲ့တင်ဖြစ်ပါတယ်
အိန္ဒိယာ က ADSl မကောင်းဘူး၊ တခြားနဲ့ယှဉ်ရင်လုံး၀မကောင်းဘူး
တယ်လီဖုန်းလိုင် ခတ်ဆုပ်ဆုပ် ခပ်နှုတ်နှုတ်
proxy ကတော မပြောတောဘူး။ ညစ်တယ်...
ဘ၀တူမို့ ရင်ဖွင့်ခွင့်ရတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...